Umfazi Ochaza Ilanga Neenkwenkwezi
Sayensi Ezibalulekileyo zeenkwenkwezi
Hlangana noCecelia Payne
Namhlanje, cela nayiphi na i-astronomer ukuba yintoni i- Sun kunye nezinye iinkwenkwezi ezenziwe ngayo, kwaye uya kuthiwa, "Hydrogen kunye ne-helium kwaye ulandelelanise ubuninzi bezinye izinto". Siyazi oku ngokufunda kwelanga, usebenzisa inqubo ebizwa ngokuthi "i-spectroscopy". Eyona nto, ikhutshisa ilanga kwiivelengths zayo ezibizwa ngokuba yi-spectrum. Iimpawu ezicacileyo kwimbonakalo zixelela izazinkanyezi ukuba zeziphi izinto ezikhoyo kwi- Sun emoyeni.
Sibona i-hydrogen, i-helium, i-silicon, kunye nekhabhoni, kunye nezinye izinyithi eziqhelekileyo kwiinkwenkwezi ne-nebulae kwindalo yonke. Sinalo lwazi ngokubulela kumsebenzi wokuphayona owenziwa nguDkt. Cecelia Payne-Gaposchkin kulo lonke umsebenzi wakhe.
Ngo-1925, umfundi wesayensi yeenkwenkwezi uCecelia Payne waphendukela kwisicatshulwa sakhe sobuchwephesha ngesihloko se-stellar atmospheres. Esinye seziphumo zakhe ezibalulekileyo kukuba i-Sun inotyebi kakhulu kwi-hydrogen kunye ne-helium, ngaphezu kwezinto zeenkwenkwezi. Ngokusekelwe kuloo nto, wagqiba ekubeni i-hydrogen yiyona nto ibalulekileyo kuyo yonke iinkwenkwezi, okwenza i-hydrogen ibe yinto ephezulu kuninzi.
Kunengqiqo, ekubeni iLanga kunye nezinye iinkwenkwezi zifakela i-hydrogen kwiibhola zazo ukuze zenze izinto ezinzima. Njengoko bekhula, iinkwenkwezi nazo zifakela izinto ezinzima kakhulu ukwenza izinto eziyinkimbinkimbi. Le nkqubo ye-stellar nucleosynthesis yinto eyenza iphela iphela kunye nezinto ezininzi ezinzima kune-hydrogen ne-helium.
Kwakhona yinto ebalulekileyo yokuziphendukela kweenkwenkwezi, oko uKecelia ayefuna ukukuqonda.
Ingcamango yokuba iinkwenkwezi zenziwa kakhulu nge-hydrogen kubonakala ngathi yinto ecacileyo kubafundi beenkwenkwezi namhlanje, kodwa ngexesha layo, ingcamango kaDkt. Payne yayimangalisa. Omnye wabacebisi bakhe - uHenry Norris Russell - akazange avumelane nayo kwaye wayefuna ukuba akhuphe kwi-thesis.
Kamva, wagqiba ekubeni ingcamango enkulu, washicilela yona yedwa, waza wafumana i-credit for the disco. Waqhubeka esebenza eHarvard, kodwa ixesha, ngenxa yokuba wayeyindodakazi, wafumana umvuzo ophantsi kakhulu kwaye iiklasi azifundisayo zazingakhange zibonwe kwiikhathalogu zekhosi ngexesha.
Kwiminyaka emva nje, i-credit for its discovery and work subsequent has been restored to Dr. Payne-Gaposchkin. Ukwaziswa ngokusekwa ukuba iinkwenkwezi zingabalwa ngamaqondo abo okushisa, kwaye zinyathelisa amaphepha angama-150 kwi-stellar atmospheres, i-stellar spectra. Wayesebenza kunye nomyeni wakhe, uSerge I. Gaposchkin, kwiinkwenkwezi ezingafaniyo. Wapapasha iincwadi ezihlanu, waza wafumana amanqaku amabhaso. Wachitha yonke imisebenzi yakhe yophando kwiHarvard College Observatory, ekugqibeleni waba ngowesifazane wokuqala ukusibeka isebe eHarvard. Naphezu kweempumelelo eziza kuba neenkwenkwezi zenkwenkwezi ngexesha elidlulileyo lokudumisa kunye neentlonelo, wabhekana nocalucalulo ngokwesini kulo lonke ubomi bakhe. Nangona kunjalo, ngoku ugubha njengomgcini oyingqiqo kunye nentsusa-mvelaphi yeminikelo yakhe eyatshintsha indlela esiyiqonda ngayo indlela iinkwenkwezi zisebenza ngayo.
Njengomnye weqela lokuqala leqela leenkwenkwezi zeenkwenkwezi zaseHarvard, iCecelia Payne-Gaposchkin yatshise umzila kubasetyhini kwizinto zeenkwenkwezi, abaninzi bathi ukukhuthazwa kwabo kukufunda iinkwenkwezi.
Ngo-2000, umthendeleko oyingqayizivele weminyaka yobomi bakhe kunye nesayensi kwiHarvard yabangela izazi zeenkwenkwezi ezivela kwihlabathi lonke ukuba zixubushe ngobomi bakhe kunye neziphumo kunye nendlela abaye batshintsha ngayo ubuso besayensi yeenkwenkwezi. Ngokukodwa ngenxa yomsebenzi wakhe nomzekelo, kunye nomzekelo wabasetyhini abaphefumlelwe inkalipho kunye nengqiqo yakhe, indima yabasetyhini kwi-astronomy iyaphucula ngokukhawuleza, njengokuba ukhethe ngakumbi njengomsebenzi.
Umzobo weNzululwazi Kulo lonke ubomi bakhe
UDkt. Payne-Gaposchkin wazalelwa njengoCelielia Helena Payne eNgilandi ngoMeyi 10, 1900. Waba nomdla kwi-astronomy emva kokuva uSir Arthur Arthur Eddington achaza amava akhe ngokuhamba kwelanga ngo-1919. Wandula wafunda i-astronomy, kodwa ngenxa yokuba wayengumfazi, wayenqatshelwe idigri evela eCambridge. Washiya eNgilani waya eUnited States, apho wafunda khona i-astronomy waza wafumana i-PhD kwiKholeji yaseRadcliffe (ngoku iyingxenye yeYunivesithi yaseHarvard).
Emva kokuba wamkele ubugqirha bakhe, uDkt. Payne waqhubela phambili ukufunda iindidi ezahlukeneyo zeenkwenkwezi, ngokukodwa iinkwenkwezi eziphezulu kakhulu " ezikhanyayo. " Inomdla wayo omkhulu kukuqonda isakhiwo se-stellar ye-Milky Way, kwaye ekugqibeleni wayefunde iinkwenkwezi eziguqukayo kwi-galaxy kunye neMagellanic Clouds eseduze . Idatha yakhe idlala indima enkulu ekunqumeni iindlela ezenziwa ngayo iinkwenkwezi, ziphila, kwaye zife.
UCecelia Payne watshata nomnye u-astronomer uSerge Gaposchkin ngowe-1934 kwaye basebenze ndawonye kwiinkwenkwezi ezifaniyo kunye nezinye iithagethi ebomini babo. Babenabantwana abathathu. UDkt. Payne-Gaposchkin waqhubeka efundisa eHarvard kwaze kwaba ngo-1966, kwaye waqhubela phambili uphando lwakhe kwiinkwenkwezi nge-Smithsonian Astrophysical Observatory (eyise-Harvard Centre for Astrophysics.) Wafa ngo-1979.
Ubomi kunye noPhando lweNzululwazi uHenryetta Swan Leavitt
I-Biography kaNicolaus Copernicus
I-Biography ye-African-American Astronomer uBenjamin Banneker
Edmund Halley: I-Comet Explorer kunye ne-Stellar Cartographer
UGeorges-Henri Lemaitre kunye nokuzalwa koMhlaba
I-Aristote yendalo: ukusuka kwiMetaphysics kuya kwiFizikiki
UGiordano Bruno: uMartyr weSayensi
Udliwano-ndlebe noConctor David James Elliott
IiKhathuthi kunye neMemes ebeka ukutshintsha kwemozulu kwiPhepha
Amanzi njenge-Element Spiritual
I-Albany GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Isikhokelo kwi-5 Imithandazo yamaHindu kuzo zonke iimeko
11 Izilwanyana ezimangalisayo ezisebenzisa izixhobo
Indlela uLondlo lweLizwi elichaphazela ngayo iinjongo zeSpanish
ITyhulo yeMveli kunye noMlingo
I-Admissions yeKholeji yase-Morrisville
Ingqwalasela yeZenzo eziphambili zeMfazwe yehlabathi II
I-Gwynedd Mercy University Yamukelwa
Indlela yokudibanisa "i-Disputer" (ukuxabana)
Ukubunjwa kwinkqubo yokuBhala
Ukuchaza ifom ye-Am-Am Golf
I-DAVIS uSurname Igama kunye nomvelaphi